काठमाण्डौ । सारा विश्वलाई नै आफ्नो कब्जामा लिएको कोरोना महामारीबाट प्रत्येक कार्यक्षेत्र, प्रत्येक काम र प्रत्येक मानिस कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित बनेका छन् । यसले मानिसहरुको जीवनमा कयौँ समस्याहरु निम्त्याएको छ । अझ विशेष त त्यस्ता मानिसहरुका लागि दुखःद खबर ल्याएको छ, जो आफ्ना आर्थिक मुद्धाहरुलाई नजरअन्दाज गर्छन वा जो यसका बारेमा...
काठमाण्डौ । घर खरिद गर्नु एउटा सपना पूरा हुनु हो भन्दा फरक पर्दैन । आफ्नै घर होस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । यदि तपाइँले घर खरिद गर्ने सोंच बनाउनु भएको छ र होम लोन लिन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले केही विशेष कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । होम लोनले व्यक्तिलाई आफ्नो आर्थिक अवस्था वा भविष्यको आयको फाइदा उठाउन र सपनाको घर खरिद गर्न सहयोग...
काठमाण्डौ । दशकौँदेखि नेदरल्यान्ड्सको दाबी रहँदै आएको छ कि उसको देशका मानिस विश्वमै सबैभन्दा अग्लो कदका छन्। नेदरल्यान्ड्सको केन्द्रीय सांख्यिकी ब्युरो (सीबीएस) का अनुसार १९५८ पछि डचका मानिसको कद विश्वकै कुनै पनि अन्य देशका मानिसको तुलनामा अग्लो रहेको छ। तर, हालै गरिएको एउटा सर्वेक्षणले आजका पिढीको कद पहिलेको पिढीको तुलनामा थोरै...
काठमाण्डौ। अफगानिस्तानमा सरकार चलाइरहेको तालिवान समूहले पूर्वउपराष्ट्रपतिको घरबाट ठूलो परिमाणमा नगद र सुन बरामद गरेको छ। अफगानिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति अमिरुल्लाह सलेहको घरबाट ६.५ मिलियन डलर नगद र १८ वटा सुनका इँटाहरु बरामद भएको तालिवानले दाबी गरेको छ। एक स्थानीय पत्रकारले नगद र सुनले भरिएको दुईवटा सुटकेसको भिडियो सार्वजनिक...
भियतनाममा अरुलाई कोरोना सारेको अभियोगमा एक व्यक्तिलाई ५ वर्ष जेल
काठमाण्डौ । भियतनाममा कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको नियम उल्लंघन गरेको तथा कोरोनाभाइरस फैलाएको अभियोगमा एक व्यक्तिलाई ५ वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ। भियतनामको एक अदालतले ले भान ट्री नाम गरेका व्यक्तिले ‘खतरनाक संक्रामक रोग’ ८ जनालाई सारेको ठहर गरेको हो। ती ८ जनामध्ये एकजनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको पनि अदालतले जनाएको...
काठमाण्डौ । के तपाइँले कहिले सोच्नुभएको छ किन हामी अंग्रेजीमा हजार अर्थात थाउजेन्डलाई छोटकरीमा ‘K’ संकेतले गर्छौं ? जस्तै १० हजार लेख्नुपर्यो हामी १०K लेख्छौँ । तर हामी किन १०T लेख्दैनौँ ? आखिर यो के शब्द कहाँबाट आयो र यसको मतलब के हो ? विश्वभर अहिले कुनै पनि शब्द छोटकरीमा लेख्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ। प्रायः मानिसले अहिले संख्यालाई...
काठमाण्डौ । अफगानिस्तानका एक पूर्वमन्त्री जर्मनीमा पिज्जा डेलिभरी गरिरहेको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। अल जजिरा अरबियाले सन् २०२० मा पद त्यागेका अफगानी पूर्वमन्त्री सइद अहमद सादतले पिज्जा डेलिभरी गरिरहेको तस्बिर ट्विटरमार्फ सार्वजनिक गरेको हो। असरफ घानी नेतृत्वको सरकारमा सादत सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्रीका रुपमा रहेका थि�...
काठमाण्डौ । ब्रान्ड गुगलको चमत्कारिक सफलताको कथा क्यालिफोर्नियाको स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीबाट सुरु भएको थियो। गुगलको सुरुआत एउटा कार ग्यारेजबाट गरिएको थियो। जुन आज एउटा ब्रान्डका रुपमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो टेक कम्पनी बनेको छ। इन्टरनेट सर्च मेसिनबाट सुरु गरिएको गुगल अहिले ई–मेल, फोटो र भिडियो, गुगल म्याप र मोबाइल फोनजस्तो...
काठमाण्डौ। कक्षा बंक गर्नुभएको छ ? सायद विद्यार्थी जीवनमा कुनै न कुनै दिन केही न केही कारण अवश्यक कक्षा बंक गर्नुभएकै होला। पढ्न अल्छी लागेको बेला कक्षा बंक गर्न कुन उपाय अपनाउनुभयो ? ज्वारो आयो, कोही बिरामी परे वा कुनै अर्जेन्ट काम पर्यो भन्ने कारण देखाउनुभयो होला। सबैको कक्षा बंक गर्ने फरक–फरक शैली रहेको हुन्छ। हालै बेलायतमा...
काठमाण्डौ । स्टार फुटबलर लियोनल मेसीको टिम अर्जेन्टिनाले ब्राजिललाई हराएर कोपा अमेरिकाको उपाधि उचालेको छ। मेसीको करिअरको पहिलो मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय उपाधि हो। यसअघि मेसीको कप्तानीमा अर्टेन्टिना सन् २०१५ र २०१६ को फाइनलमा हारको कामना गरेको थियो। अर्जेटिनाले २८ वर्षपछि कोपा अमेरिकाको उपाधिमाथि कब्जा जमाएको हो। यसका साथ अ�...
काठमाण्डौ । नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा नौमुठे गाई पाइन्छ। जुन लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको छ। यो गाई सामान्य गाईको तुलनामा सानो हुन्छ। बंगलादेशमा हालै फेला परेको एउटा गाई आकारमा निकै सानो भएकै कारण अहिले भाइरल बनेको छ। यो गाईको नाम रानी राखिएको छ। यो गाईको लम्बाइ केवल २० इन्चको मात्रै छ। जुन यसअघि गिनिज बुकमा नाम...
काठमाण्डौ । हवाई कारको एउटा मोडेल स्लोभाकियाका दुई विमानस्थलबीच ३५ मिनेटको परीक्षण उडानमा सफल भएको छ। आवश्यकताअनुसार विमान वा कारको रूप धारण गर्न सक्ने एयरकारमा बीएमडब्ल्यूको इन्जिन र पेट्रोल पम्पको साधारण इन्धनमा चल्छ। यसका निर्माता प्राध्यापक स्टेफन क्लेनका अनुसार एयरकार १,००० किलोमिटरसम्म ८,२०० फिटको उचाइमा उड्न सक्छ। यो...
काठमाण्डौ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लंघन गरेको आरोप खेपेका बेलायतका स्वास्थ्यमन्त्री म्याट ह्यानककले राजीनामा दिएका छन्। मन्त्री ह्यानककले कोरोना नियन्त्रणका लागि अपनाइएको भौतिक दूरीको नियम उल्लंघन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रै आफूसँग काम गर्ने एक महिला सहकर्मीलाई अँगालो हालेर चुम्बन...